Hanaankii dawladnimo ee Itobiya oo Faraha kabaxay. | ogaden24
Hanaankii dawladnimo ee Itobiya oo Faraha kabaxay.
Waxaa Guud ahaanba meesha kabaxay nidaamkii dawladnimo iyo doorkii xukuumada dhexe ee Federalka, deegaanadu waxay isu diyaarinayaan siduu midwaliba danihiisa iyo maslaxadiisa udifaacan lahaa.
Guud ahaan waxaa kala go’an deegaanada Axmaarada iyo Tigreega oo kujira xaalad dagaal oo mid waliba midka kale dab kadhex aloosayo, waxaana jira dhaqdhaqaaqo ciidan oo halis ah saacad kastana waxaa bilaaban kara dagaal Labada mamul Qomiyadeed dhex mara.
Oromada waxaa xaalad adagi kala dhaxayso Qomiyadaha Binushangulka, Canfarta, Soomaalida iyo deegaanka Hararida oo guud ahaanba daaqada kasiibaxaya, maadaama culays badan ay kuhayaan xoogaga Oromada ah ee kuhareeraysan.
Qoomiyada Axmaarada ayaa guud ahaanba laga nadiifiyay deegaanada ,Binushangul, Oromo, Canfarta, Ganbelaha iyo intabadan deegaanada Tigreega.
Deegaanada Axmaarada, Gambela iyo Binshangulka ayaa noqday wadooyin Hubku soo maro waxaana Tusaale inoogu filan in maalinkasta laqabto Hub celcelis ahaan gaadhaya 1,000 oo Qori iyo 10, 000 kun oo Rasaas ah, bal hada Qiyaas hub intee le,eg oon laqabanin ayaa soo galaya dalka kudarsa oo hubka laqabto intiisa badan waxaa lagu qabtaa gudaha iyo agagaarka caasimada dalka ee AA.
Waxaa socda Hub Aruursi xawli kusocda oo waliba xad dhaafa deegaanaduna waxay kor uqaadeen adkaynta iyo kordhinta tirada ciidamada gaarka ah ee ay leeyihiin, marka laga reebo deegaan keena oo isagu Laxdaba moog islamarkaana ah deegaanka maanta ugu amaansan uguna fursada fiican!.
Dhaqaalaha Itobiya ayaa maraya meeshii abid ugu liidatay waxaa taagan guud ahaanba mashaariicdii waa waynayd,
Dhanka kale waxay xaalad qalafsani kajirtaa deegaanka Oromada oo uu kasocdo dagaal saxaafada laga qarinayo oo udhexeeya dawlada iyo ciidamo taabacsan OLF oo gacanta kuhaya welaga iyo intabadan arse.
Iskusoo wada duuboo waxa socda Galawgaa jiifka ku’arka balse su’aashu waxay tahay inaga maxaa inoo qorshaysan mase ku baraarug sanahay xaalada jirta shacab iyo xukuumadba?